Online Marg | बाबुरामले नै यस्तो ठोकुवा गरेपछि गठबन्धनको भविष्यमाथि नै मडारियो कालो बादल !
बाबुरामले नै यस्तो ठोकुवा गरेपछि गठबन्धनको भविष्यमाथि नै मडारियो कालो बादल !
काठमाडौं– जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई राजनीतिक शक्ति र परिचर्चाको केन्द्रका पात्र हुन् ।जनचोर्माबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका भट्टराई माओवादी, नयाँ शक्ति, संघीय समाजवादी हुँदै अहिले जसपामा छन् । कुनै समय थियो, उनलाई नेपाली राजनीतिका दूरदर्शी, पढेका, बुझेका नेता मान्नेको जमात बाक्लै थियो । तर, माओवादी त्यागेर दलबदलमा लागेपछि सर्वसाधारणले समेत भन्न थालेका छन्– ‘भट्टराईको राजनीतिक भविष्य संकटमा प¥यो । उनले अस्थिर राजनीति गरे ।’
तर, भट्टराई भने आमनागरिकको बुझाई जस्तो दलबदल नभई आफूले विकास, सुशाशन, समृद्धिका निम्ति खुड्किलो पार गर्दै गइरहेको दाबी गर्छन् । दलबदल, सत्ता सञ्चालन, एमसीसी, सत्ता गठबन्धनलगायत विषयमा गोरखामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसँग पत्रकार अश्विन दानीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
हामी त्यो भन्दा अगाडि बढेर वैकल्पिक शक्ति निर्माणतिर जानुपथ्र्याे । त्यसमा प्रचण्डजी पुरानै ठाउँमा टाँसिएर बस्नु भयो । पुरानै सोच र संगठनले काम नगरेपछि उहाँ बेलाबखतमा यसलाई विखण्ड गर्नुप¥यो भन्नुभएको छ, त्यो औचित्य सिद्धिसक्यो त हामीले पहिल्यै भनेकै हो । त्यसलाई मानेर उहाँ एउटा समाजवादी नयाँ धु्रवीकरणतर्फ जानु नै उपयुक्त हुन्छ ।
त्यो सत्य होइन । हामीले संरचनात्मक कुरा हेर्नुपर्दछ । हामीले छोटो समयकै अवधिमा पनि जनताले सम्झनलायकका काम गरेका छौँ । म अर्थमन्त्री छँदा, प्रधानमन्त्री छँदा गरेको काम अहिले पनि जनताले प्रशंसा गर्छन् । त्यसैले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने होइन । कुनै जोगीको कान चिरेको हुन्छ, कुनै जोगीको कान नचिरेको पनि हुन्छ । सबैलाई एउटै भन्नु हुँदैन । –न्युज कारखाना
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैले साथ दिनुपर्छ ः जलस्रोत विज्ञ सूर्यनाथ बास्तोला ( अन्तरवार्ता)
प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रचण्डको घोषणा (हेर्नुहोस् ताजा अन्तरवार्ता)